Gqibezela ikhosi yendlela ye-BIM-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Gqibezela ikhosi yendlela ye-BIM
Kule khosi sele ihambile ndikubonisa inyathelo ngesinyathelo indlela yokusebenzisa indlela ye-BIM kwiiprojekthi nakwimibutho. Kubandakanya iimodyuli zokuziqhelanisa apho uza kusebenza kwiiprojekthi zokwenyani usebenzisa iinkqubo ze-Autodek ukwenza iimodeli eziluncedo ngokwenene, ukwenza imisebenzi ye4D, ukudala izindululo zoyilo, ukuvelisa ukubalwa kwemetrikhi ngqo yokuqikelelwa kweendleko kunye nokusetyenziswa koVavanyo oluneenkcukacha zangaphandle zoLawulo Amaziko.
Le khosi ilingana neeMasters ezininzi ze-BIM Management Management, iindleko zazo zijikeleze i-USD3000 ukuya kwi-USD5000, kodwa, endaweni yotyalo-mali olunjalo, unokufumana ulwazi olufanayo ngenxalenye yeendleko. Ngenye iikhosi zam zohlaziyo kunye neRobhothi uya kuba nombono opheleleyo we-BIM. Khumbula ukuba i-BIM akuyona inkqubo, yindlela yokusebenza esekwe kubuchwepheshe obutsha. Akukho mntu ukuxelela loo nto kwaye ngenxa yoko unokucinga ukuba ukwazi i-BIM kufuneka ukwazi kuphela indlela yokumisela kuVuselelo. Kodwa oku kuxoka, yiyo loo nto uninzi lungafumani ziphumo ezilindelekileyo nangona betyala amawaka eedola kuqeqesho nakwisoftware.
Ngale khosi uya kufunda ukusebenzisa i-BIM kuyo yonke imijikelezo yobomi yeprojekthi, ngelixa ungasebenza kwimisebenzi eyenziwayo kunye nekhokelwayo ekhokelwayo kwiinkqubo.
Sebenzisa indlela ye-BIM kwiiprojekthi nakwimibutho
Sebenzisa iinkqubo ze-BIM kulawulo lweprojekthi yolwakhiwo
Yenza iimodeli ezinokwenyani ezibonisa iimeko ezakhayo
Vuselela izifaniso-nkqubo kwi4D yenkqubo yokwakha
Yenza izindululo ezingqinayo zamanqanaba okuqala eprojekthi
Yenza iingqinisiso zemetropikhi kwizindululo eziqinisekileyo
Yenza iikhompiyutha ezinemininingwane eneemodeli zeBIM
Sebenzisa Uhlaziyo lolawulo lwamaziko kunye nolawulo logcino loncedo
Qhagamshela Hlaziya kunye neenkcukacha zangaphandle
Ulwazi olusisiseko lweRevit
Ikhompyuter ene-Revit kunye neN Naviswork
Ngubani le khosi?
BIM Imifanekiso kunye neemodeli
Iikhosi-BIM MEP Iikhosi-Ukusebenza kweBIM Iikhosi-Ulwakhiwo lweBIM Izifundo zeKhosi
Inkomfa yaseTshayina ye-Space 2019-Ibanjwe ngempumelelo ngexesha le-Space-Day yaseTshayina